Vonona Hijoro Noho Ny Fahasimban’ny Toetr’Andro ny Mpiadin’ny Toetr’Andron’i Pasifika ao Fiji · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2014 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Nederlands, Français, Español, বাংলা, English
Fantatry ny Mpiadin'ny Toetr'Andron'i Pasifika ao Fiji hoe aiza amin'ny tantara no misy azy ireo. Ny fanetsehana ny daholobe no fomba tsara indrindra hampihontsona ny rafitra manontolo handray andraikitra. Efa nisy ny Diabe manohitra ny ady, manohitra ny fampiasana nokleary, diabe hahazoana ny zo ara-tsivily, ary ny hafa koa. Amin'ny 21 Septambra, hijoro isika ho firaisankina amin'ireo manao diabe hisian'ny rariny eo amin'ny fiheverana ny troetr'andro.
Tompon'ny sary: Fenton Lutunatabua
Ny lahatsoratra dia nosoratan'i Fenton Lutunatabua avy ao amin'ny 350.org, fikambanana iray manangana hetsika amin'ny toetr'andro ankapobe, amin'ny fitarihana ny Diaben'ny Vahoaka Amin'ny Toetr'Andro sy amin'ny fanentanana ankapobe, ary narafitra indray mba havoaka amin'ny Global Voices ao anatin'ny fifanarahana hifampizara vontoaty.
Mihoatra ny 100.000 no antenaina hidina an-dalamben'i New York amin'ny 21 Septambra handray anjara amin'ny Diaben'ny Vahoaka amin'ny Toetr'andro roa andro monja mialoha ny Vovonan'ny Firenena Mikambana Momba ny Toetr'Andro. Mihoatra ny 2000 ny hetsika nomanina hotontosaina amin'ny firenena 150 manerana izao tontolo izao mandritra ity herinandro ity ao anatin'ny Fanetsehana ny Vahoaka amin'ny Toetr'Andro. Izao indrindra no fotoana: nampitandrina antsika ny manampahaizana fa mihodikodina ho tsy voafehy intsony ny fihafanan'ny toetr'andro manerantany. Mila mahita fandraisana andraikitra izao dieny izao isika. Tsy misy andro handakandakana kapoaka eny an'arabe. Fotoana izao hihetsehana, fa tsy hanaovana be resaka.
Manandanja amin'ny mponin'i Pasifika tokoa ny krizin'ny toetr'andro, noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina izay mandrahona ny fisian'izy ireo. Any amin'ny Nosy Pacifika, avy any Tonga hatrany Tuvalu ka hatrany Tokelau, miantso hifamory hihetsehana ny mponina amin'ireo toerana ireo, fa tsy be resaka fotsiny amin'ny fiarovana ireo Nosin'i Pasifika. Ankilan'ny hanaovan-dry zareo diabe, dia efa manomna ihany koa izy ireo handefa Mpiadin'ny Toetr'andro ao Pasifika miisa 30 anaty lakana [mg] hibahanana ny seranantsambo fanondranana arintany lehibe indrindra manerantany miorina ao Aostralia amin'ny Oktobra.
Eto ambany ny andian-tsary avy amin'ny Mpiadin'ny Toetr'andron'i Pasifika avy ao Fiji ao anatin'ny fanomanana ny hetsiky ry zareo handray anjara amin'ny Fanetseham-Bahoaka amin'ny Toetr'andro.
Ao anatin'ny hetsika lehibe hisian'ny rariny manoloana ny toetr'andro ny Diabem-Bahoaka Amin'ny Toetr'Andro. Manao ny asany mifanehatra isan'andro amin'ny fahasimban'ny toetr'andro ny olon, ka fotoana izao ho antsika hiaraka hanao diabe. Miantso izahay amin'ny hanaovana zavatra mihoatra noho ny hetsika manoloana ny toetr'andro: miantso izahay isikan'ny rariny eo amin'ny toetr'andro. Mila hetsika miaro ny mahantra indrindra sy ireo marefo indrindra ao amin'ny fiaraha-monina izahay sy vahaolana manao ho laharam-pahamehana ireo teraka vesaran'olana.
Ho fampakarana avo kokoa ny feon'ireo vahoaka efa iharan'ny fiantraikan'ny fahasimban'ny toetr'andro sy ny fandotoana ny diabem-bahoaka momba ny Toetr'andro. Fantatsika fa ilaina ho ao anivon'ny vahaolana momba ny toetr'andro ny vahoaka. Manome fahefana ho eo ampelatanan'ny orinasa goaibe ny toekaren'ny [famokarana] angovo taloha. Tokony hamerina ny fahefana ho eo ampelatanan'ny vahoaka ny toekaren'ny [famokarana] angovo vaovao.
Fotoana izao hanehoana amin'izao tontolo izao fa tonga miaraka isika. Mitaky zavatra isika, izay fantatsika, fa azontsika takarina — hoavy salama sy toekarena miasa ho an'ny vahoaka sy ny planeta.